Member Area Login Sign Up
Parties, Events & Entertainments
(ပါတီ၊ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ နှင့် စတိတ်ရှိုးများ )
(အသက်အပိုင်းအခြား) 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 to 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
(လူမျိုး) -- ChinChineseHinduKachinKayinMonMuslimMyanmarNepaliOthersSelectShanYakhine
(ကိုးကိုယ်သည့်ဘာသာ) -- BuddhistChristianHinduMuslimOthersSelect
(အလုပ်အကိုင်) -- Actor/ActressDoctorEmployerEngineerOthersSelectSelf-Businessstudent
(အရပ်) Ft4567 to Ft4567
Which Day Born ?
(ဘာနေ့သား/သမီးလဲ) -- FriMonSatSelectSunThursTueTuesWed
How can I becomeaGolden Member ?
DEAR Sir / Mam လူကြီးမင်းခင်ဗျာ !
Budget / Month Between (သင်၁လပေးနိုင်သောငွေ)
Free Registeration Here ... !
SKY LARK Auto
We offer stlylish wedding planings & services with new ideas that deepen the trust of our members. According to your budget we create wedding plans with new ideas & implement it all with our warm & family orianted services. ..............
We offer stlylish wedding planings & services with new ideas that deepen the trust of our members. According to your budget we create wedding plans with new ideas & implement it all with our warm & family orianted services. ..............zzz
We offer stlylish wedding planings & services with new ideas that deepen the trust of our members. According to your budget we create wedding plans with new ideas & implement it all with our warm & family orianted services. .............. Furniture
We offer stlylish wedding planings & services with new ideas that deepen the trust of our members. According to your budget we create wedding plans with new ideas & implementorianted services. .............. Hotel
We offer stlylish wedding planings & services with new ideas that deepen the trust of our members. with new ideas & implement it all with our warm & family orianted services. .............. Donation
ရာသက်ပန် Free Member ဖြစ်စေဖို့ 
ဒါလေးကို Clcik လုပ်လိုက်ကြစို့ 
နူးညံ့သောအသားအရေ ပိုင်ရှင်ဖြစ်လိုသူများအတွက် ...
လက်တွေ့ကျကျအသားဖြူခရင်(မ်) (၄၅)ရက်အတွင်း အပျိုစင်ဘ၀ကို ပြန်လည် ရယူလိုသူများအတွက် ...
Sky Lark နတ်စည်းစိမ်ခံ ဂျယ်လ် မိန်းကလေးတွေက ချောမော လှပတဲ့ ယောကျာင်္းတွေထက်သန်မာထွားကြိုင်းပြီးယောကျာင်္း ပြီသတဲ့ ယောကျာင်္းတွေကို ပိုမိုစွဲလမ်း နှစ်သက် ကြတယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား? (၂၀)ကျော်လေးလို လန်းသွားစေမဲ့
Welcome to the Myanmar's leading matrimonial service portal. We provide best & one stop platform for online matchmaking (matrimonial) service that allows brides & grooms in Myanmar and around the world to meet and comminucate regarding marriage (matrimony). skylark-vivaha utilize the best technology available for our matrimonial services. Register Free and create your matrimonial profile & take advantage of our services like email, view phone and instant messaging features designed to help you find your right prospective Myanmar brides and Myanmar grooms match. We also provide one stop free real estate ( property rental & purchase ) services all over Myanmar . Highly requested to communicate each other with respect & politeness .
ဤဆိုက်ပေါ်တွင် နိုင်ငံကြီးသားများပီပီ တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ယဉ်ကျေးစွာ ဆက်ဆံကြပါ ရန် အထူး မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။
ပြောသည့်အတိုင်း မဖြစ်လျှင် သင့်ငွေ (၂)ဆ ချက်ချင်းပြန်အမ်းမည်။
ဒီလောက် သေချာတဲ့ အာမခံချက်ကို သင် ဘယ်တံဆိပ် ၊ ဘယ်ပစ္စည်းမှာ ရနိုင်မလဲ? မည်သည့် sky lark ပစ္စည်းကိုမဆို
online မှမှာယူပါက ကျပ် ၇၀၀ ပေးရုံမျှဖြင့်
ရန်ကုန်မြို့ တွင်းမည်သည့် နေရာသို့မဆို
အသေးစိတ်သိလိုပါက ... [ကြည့်]
skylark-vivaha.com သည်မြန်မာပြည်ဧ။် ပထမဆုံးနှင့် တစ်ခုတည်းသော ဘ၀ကြင်ဖော် ရှာဖွေရေးနှင့် ဆန်းသစ်သော တီထွင်မှုများဖြင့် အကောင်းဆုံး မင်္ဂလာဆောင်ဝန်ဆောင်မှု ပေးနေသော ခေတ်မှီ ၀က်ဘ်ဆိုက် ဖြစ်ပါသည်။ ဤ ဆိုက်ပေါ်တွင် Register လုပ်လိုက်ရုံဖြင့် သင်နှင့် နေ့နံ ကိုက်ပြီး ရှေ့သွားနောက်လိုက်ညီသော ဘ၀ကြင်ဖော်လောင်းကို အခမဲ့ သင်စိတ်ကြိုက် အကန့်အသတ်မရှိ ယဉ်ကျေး သိမ်မွေ့ သောအမူအရာအပြောအဆိုများဖြင့် တပျော်တပါးရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ အကြင်လင်မယားအဖြစ် လက်ထပ်ထိမ်းမြားလိုသော မင်္ဂလာစုံတွဲများ မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲ ကျင်းပရန်နှင့် ဘ၀ သစ်ထူထောင်ရန်အတွက် လိုအပ်သောပစ္စည်းအစအဆုံး ကိုအထူးဈေးနှုန်း သက်သာစွာဖြင့် ၀ယ်ယူရရှိနိုင်သော ဆိုက်များဧ။် လိပ်စာနှင့် ဆက်သွယ်ရမည့် ဖုန်းနံပါတ်များကိုလည်း အခမဲ့ ၀င်ရောက်ရှာဖွေ ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။
အသင့်နေနိုင် သော တိုက်ခန်းများ၊ ကွန်ဒိုမီနီယံများ၊ လုံးချင်းတိုက်များ၊ မြေကွက်လွတ်များကို မည်သည့် ပွဲခမှပေးစရာ မလိုဘဲ မည်သည့် အိမ်ခြံမြေ ငှား/ရောင်းဝယ်ရေး မှ သွားစရာမလိုဘဲ ပိုင်ရှင်များနှင့် တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ် ပြောဆို၍ ငှားရမ်း/ရောင်းဝယ်ခြင်းများကို ၀င်ရောက်ရှာဖွေ ကြည့်ရှု့၍ မြန်ဆန်လွယ်ကူစွာ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ငှား/ရောင်းချလိုသော တိုက်ခန်း၊ ကွန်ဒိုမီနီယံ၊ အိမ်ခြံမြေပိုင်ရှင်များ HotLine For Real Estate Owners သို့ဝင်ကြည့်၍ မပြောပလောက်သော အလွန်နည်းသော ငွေကြေးဖြင့် ဤဆိုက်ပေါ်တွင် သင်(ငှား/ရောင်း) လိုသောကိစ္စ မပြီးမချင်း (၁)နှစ်တိတိ အချိန်ယူကာ ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာဖြင့် ကြော်ငြာနိုင်ပါသည်။ ကား၊ ဆိုက်ကယ် (ငှား/ရောင်း) ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုလည်း အထက်ပါအတိုင်း ပြုလုပ်နိုင်ရန် အတွက် စီစဉ်ထားပါသည်။ ကား/ဆိုက်ကယ် ပိုင်ရှင်များ Hot Line For Car & Bike Owners ကြည့် ... ။ အခြား သုံးပြီး အသုံးဆောင်ပစ္စည်းများ ကိုလည်း အလွယ်တကူ ရောင်း/၀ယ် နိုင်ရန်အတွက် စီစဉ်ပေး ထားပါသည်။ အသုံးအဆောင် ပစ္စည်း များ ရောင်းလိုသော ပိုင်ရှင်များ Hot Line For Commodity Owners ကြည့် ... ။
ဇနီးမောင်နှံများ အိမ်အကူလို၍ဖြစ်စေ ၊ မိမိကိုယ်တိုင် အလုပ်အကိုင် မရှိ၍ အလုပ်လိုအပ်နေလျှင်ဖြစ်စေ ဤ၀က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် ရှာဖွေကြည့်ရှု့ နိုင်ပါသည်။ အလုပ်ရှင်/လုပ်ငန်းရှင်များ(၁)ဦးခေါ်လျှင်သော်၎င်း၊ (၁၀)ဦးခေါ်လျှင်သော်၎င်း အလုပ်နေရာ တစ်ခုတည်းဖြစ်ပါက ( ဥပမာ - သန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်း (၁၀)ဦးအလိုရှိသည် ဟု ကြော်ငြာလိုပါက ၊ အလုပ်နေရာတစ်ခုတည်းအတွက်ဖြစ်၍ ) ကျပ် ၃၀၀၀ ပေးရုံဖြင့် သင့်ကြော်ငြာကို ဤဆိုက်ပေါ်တွင် တစ်နှစ်တင်ထားနိုင်ပြီး သင့်စိတ်ကြိုက် ၀န်ထမ်း ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ လုပ်ငန်းရှင်မှ သန့်ရှင်းရေး - ၀န်ထမ်း(၁၀)ဦး နှင့် ယဉ်မောင်း - ၀န်ထမ်း(၃)ဦး အတွက် ကြော်ငြာလိုပါက တစ်နှစ်စာအတွက် ကျပ် ၆၀၀၀ ပေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။ အလုပ်ှရှင်/လုပ်ငန်းရှင်များ Hot Line For Job Employers ကြည့် .... ။
ဤအောက်ပါကဏ္ဍများတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုချင်သူများ Register လုပ်ရန်မလိုပဲ တိုက်ရိုက်ဝင်နိုင်ပြီး စာ နှင့် Photo upload လုပ်ချင်သူများ Register လုပ်ပြီး ဤကဏ္ဍများအတွက် ပြန် ၍ Login ၀င်ပါရန်။ အထက်ပါ သတို့ သား၊ သတို့ သမီး ကဏ္ဍတွင် Register လုပ်ပြီးသူများ တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်၍ စာနှင့် photo upload လုပ်ချင်သူများ ဤကဏ္ဍများအတွက် Login ပြန်ဝင်ပါရန်။ ( 9-1-2012 မှစ၍ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ ကဏ္ဍများအတွက် စာနှင့် Photo များကို Upload လုပ်နိုင်ပါသည်။ )
ရုပ်ရှင်၊ ဗီဒီယို၊ ဂီတ အနုပညာသတင်းများ
Video, Movies & Music
Model Girls & Model Boys Photos
အဝတ်အစား၊ ဖက်ရှင် ဒီဇိုင်း
အသစ်အဆန်းများနှင့် မြန်မာဒီဇိုင်နာများ၏ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများ
Fashion & Myanmar Designers
မျက်နှာနှင့် ခန္ဓာကိုယ် အလှပြင်နည်းများ
Face Care & Body Fitness
About New Mobiles & Softwares
Desktop နှင့် Laptop များအကြောင်း
Latest Desktops & Laptops
About New Private Schools in Myanmar &
Schools & Universities in Abroad
အိမ်သုံး လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်/စက်အငှားများ
Skylark Automobile Rentals
တစ်ကိုယ်ရည်သန့် ရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေး
Knowledge About Fit & Healthy
About Cosmetics in Myanmar
Latest News For Business Men
Latest News For Farmers
တိုင်းပြည် တိုးတက်ရေးနှင့် ဆင်းရဲမွဲတေမှု့
ပပျောက်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် မျိုးချစ်လူငယ်များ တတ်နိုင်သလောက် တစ်ဘက်တစ်လမ်းမှ ပါဝင် လာနိုင်ရေး အတွက်
Latest Electric Equipments